को’रोनाको अर्को ठुलो झ’ट्काका लागि तयार रहन डब्ल्युएचओको चे’तावनी ! [जानकारीको लागी सबैलाई शेयर गरौँ] – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/को’रोनाको अर्को ठुलो झ’ट्काका लागि तयार रहन डब्ल्युएचओको चे’तावनी ! [जानकारीको लागी सबैलाई शेयर गरौँ]
को’रोनाको अर्को ठुलो झ’ट्काका लागि तयार रहन डब्ल्युएचओको चे’तावनी ! [जानकारीको लागी सबैलाई शेयर गरौँ]
एजेन्सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)ले को’रोना भा’इरसको अर्को झ’ट्काका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने चे’तावनी दिएको छ। संगठनका एक अधिकारी डा. डेबिड नबारोले को’रोना भा’इरसको अर्को एउटा झ’ट्काका लागि तयारी रहनुपर्ने चे’तावनी दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘जतिजति लकडाउन खुकुलो हुँदै जान्छ, त्यती धेरै को’रोना भा’इरस सं’क्रमणको आँ’कडामा अत्यधिक वृद्धि हुनसक्छ । यसका लागि हामी तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ।’
बिबिसीका अनुसार संसारका विभिन्न देशले लकडाउनमा खुकुलोपन अपनाउन थालेपछि डब्ल्युएचओले चे’तावनी जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यसैबीच को’रोना भा’इरसबाट ल्याटिन अमेरिकी देश ब्राजिलमा पछिल्लो २४ घन्टामा २६ हजार ४ सय भन्दा धेरै को’रोना सं’क्रमित भेटिएका छन् ।
क्रोएशियाले भने १० युरोपली देशका लागि आफ्नो सी’मा खोल्ने निर्णय गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि यस्तो निर्णय गरेको क्रोएशिया सरकारले जनाएको छ । जोन हप्किन्स युनिभर्सिटीका अनुसार संसारभरी करिब ६० लाख व्यक्ति को’रोना भा’इरसद्वारा संक्र’मित भइसकेका छन् । तीमध्ये तीन लाख ५९ हजारको कोभिड–१९ का कारण मृ’त्यु भइसकेको छ ।
भोलिदेखि सार्वजनिक यातायात र हवाई सेवा सञ्चालन हुने